ukhona lapha: Ikhaya umzimba Ukunakekelwa
Okukushoyo umzimba isikhumba ithoni: ububanzi kweemali sokubuyiselwa
Okukushoyo umzimba isikhumba ithoni Ngesikhathi imikhiqizo core brand izimonyo zokupheka TianDe-bendabuko empumalanga, njengengxenye lapho izithako zemvelo kuphela. Ngaphansi kwalo brand kukhicite 500 izinhlobo imikhiqizo yezimonyo, kufaka kusho ithoni umzimba isikhumba. Ububanzi izimali ukubuyisela isikhumba ithoni Lawa mathuluzi zihlanganisa izidakamizwa, okuncike uLwandle Lukasawoti, nge izithasiselo … Continue reading Okukushoyo umzimba isikhumba ithoni: ububanzi kweemali sokubuyiselwa →
okuningi: Okukushoyo umzimba isikhumba ithoni: ububanzi kweemali sokubuyiselwa
Yini izinqubo kungenziwa ehlobo lika-salon
ihlobo – ngaleso sikhathi, lapho inani ukuvakashelwa emtholampilo yezimonyo kwandisa, bese ubhalisele inqubo udinga okungenani amaviki amabili. Futhi zonke ngoba, ukuthi ngalesi sikhathi sonyaka abesifazane kakhulu ufuna ukuba amahle. Futhi nakuba zikhona eziningana izinqubo, okungakwazi kwenziwe (ukususa amavukuzi, Ngokwesibonelo) noma efiselekayo (Lezi zihlanganisa anti-ukuguga umjovo), kuyinto … Continue reading Yini izinqubo kungenziwa ehlobo lika-salon →
okuningi: Yini izinqubo kungenziwa ehlobo lika-salon
Nezenhliziyo kwa-Israyeli ngonyaka esimiso senhliziyo nemithambo yegazi emhlabeni wonke baphathe izimpilo abaningi, kuka kuka oncological. Cishe wonke umuntu ngomzuzu umuntu emhlabeni kwenzeka isilethikusebenza. Nakuba, ukuthi leli qembu izifo kakhulu evimbela indlela efanele yokuphila, abantu abaningi bamshaya indiva ngokwanele ukuba impilo yabo, okuholela … Continue reading Nezenhliziyo kwa-Israyeli →
okuningi: Nezenhliziyo kwa-Israyeli
uwoyela Monarda ikhuthaza ukuphulukiswa futhi akunqandi futhi disinfects
Amafutha Monarda ikhuthaza ukuphulukiswa futhi disinfects iphinde ivimbele isitshalo ekwelapheni Monarda ngokwanele ejenti enamandla isinqandakuvunda futhi eqeda ukuvuvukala, nakuzo zonke izici wabo ozuzisayo ayagcinwa ngokugcwele akhiphe amafutha. Monardovaya uwoyela extractor ngisho amanani ngomzuzu uyakwazi uvikelekile emagciwaneni eziningi: Pseudomonas aeruginosa, streptokokka, Candida, Staphylococcus aureus, njll. La mafutha esihlahla ngokuphelele non-enobuthi, … Continue reading uwoyela Monarda ikhuthaza ukuphulukiswa futhi akunqandi futhi disinfects →
okuningi: uwoyela Monarda ikhuthaza ukuphulukiswa futhi akunqandi futhi disinfects
Ukusoka - ukuhlinzwa, Kuhloswe ukuba ingxenye noma ngokuphelele ukusika skinfold, ngesikhathi okususa fihla ihlanganisa glans umthondo. Lo msebenzi ungase kwenziwe ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, kuhlanganise izimo zezokwelapha hhayi kuphela, kodwa amasiko enkolo. Ngaphezu kwalokho, abanye bakholelwa, ukuthi ukusoka uyakwazi ukwenza ukuphila obuseduze Bole yokuhlanzeka. Izinzuzo tsirkumzitsii Namuhla … Continue reading ukusoka →
ikhasi 1 kusukela 5
isicelo Proper wemimoya – amathiphu kuyoshaya ukumelana yabo
Solyanaya emhumeni: uzuze umzimba
Susa amavukuzi kahle
Yini odinga ukuyazi mayelana hemorrhoids zonke?